Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/customer/www/dayaxfxacademy.com/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 8
Dayax FX Academy Home | For All your Forex needs
Dayax FX Academy
Kusoo Biir Bulshadeena Maanta.
Waxaan ardayda Ku Tababarnaa sida looga ganacsado suuqyada Forex, anaga oo adeegsanayna farshaxanka fudud.
Himiladeenna koowaad waa inaan kaa dhigno ganacsade faa’iido Joogto ah ka sameeya Ganacsiga Forex, waxaan ku siin doonnaa taageero badan oo adiga kugu saabsan si aad taas u gaadho. Markaad isqorto Academy-geena waxaan kuu soo diri doonaa emayl faahfaahsan oo kuu sharxaya talaabooyinka ay tahay in aad Raacdo marka aad casharadda forex Daawanayso,
Magacaygu Waa Abdifatah mahamed waxen kunoolahay magaalada Muqdisho. Dayax Fx Academy waa goobtii uguhoreysay aan ugu imaado casharo si xirfadeysan loo diyaariye. Anigoo Kuwareeray suuqa forex.
Aad ayaad u mahadsantihiin Macalimiinta Dayax Fx Academy Casharada aan ka fahmey ma Jiro macalimiin kale oo aan kafahmey waxaanan kabartey istiraatejiyad lagu kalsoonaan karo, Alle haydin barakeeyo.
Idil Mahamed Hassan
Magacaygu Waa idil mahamed hassan, waxen kunoolahay wadanka Sweden, Dhamaan waxaan idiin ka Mahad celineyaa macalimiinta Iyo hawl wadeenada Dayax Fx Academy dadaalka Iyo kartida Aad noo hurteen si aan ugamid noqono dadka kuguuleyste iney lacag kasameeyaan suuqa forexka.
Hadafkeenu waa in aan sanadkasta soo saarno ugu yaraan 1,000 ganasade Suuqa Forex faa’iido Badan ka Samayn doona.
kaliya waxaanu ku Baraynaa Sirta Saxda ah ee Suuqa Lacag lagaga Sameeyo oo waxaad sameysan doontaa dakhligaaga Mustaqbalka.
Markaad Nagamid Noqoto
Todobaadkasta Waxaan si adag u lafa guri doonnaa Lacagaha dhaqaaqa Ka samaynaya suuqyada Forex anagoo raadineyna fursadaha ganacsi ee ugu wanaagsan, si aan idin kula Wadaagno.
Walaaca iyo cabsida Kaaga Jirta ganacsiga Forex ayaa hubaal la Jabin doonaa, adiga oo noqon doona ganacsade dhiiran oo faa’ido badan sameeya.
Muxuu ku barayaa Sirta Ganacsiga aad Baranaysaa?
Dhamaantiin waxaad maraysaan xilliyo adag inta lagu gudajiro safarkiina ganacsiga, Waxa muhiimka ahi waa sida aad uga jawaab celiso Casharadda aad qaadanayso oo ugu dambayntiina kor u kac Noloshaadda ku Samaynaya.
Caqabadahaan yari waxay dhisaan dabeecadaada waqti ka dib waxayna kaa caawineyaan inaad ku noqotid qofka iyo ganacsadeha aad rabto inaad noqotid mustaqbalka.
Maxay Go’aamin doonta Cilmiga aad Baranaysaa!?
Awoodda aad u lahaan karto adkeysi ilaa aad guuleysato ayaa ugu dambeyntii go’aamisa ganacsade weyn”.
Waxaan kugu Tababaraynaa xirfad muhiim u ah ganacsade guuleysta mustaqbalka – Awoodda iyo Siraha Suuqa Sarifka Lagacaha qalaad ee Forex ayaad si buuxda ula wareegeysaa.
Xulo Qorshe adiga kuu shaqeeya
Helitaan buuxa oo ku Saaabsan taxanaha Aasaaska Forex Trading.
Helitaankta Dhammaan Sirta iyo Awooda Dayax Fx Strategy.
Helitaanka dhacdooyika Suuqa Usbuuc walba Maalinta Axada.
Faallooyinka Suuqa toddobaadlaha ah.
Talooyin Badan oo ku Saabsan Marxaladaha suuqa oo Muuqaal ah.
Helitaanka Dayax Fx Candlestick oo Awood Badan.
Helitaanka Dayax Fx Patterns oo Awood Badan.
Education 3 Months
Education & VIP Signals
Helitaanka Signals, ama calaamado Faa’ido Badan Todobaadkasta
Helitaanka Wararka Saamaynta ku leh Dhaqaaqa suuqa oo aan Faa’ido ka Samayn doono
Helitaanka Dhamaan taxanaha Aasaaska Forex Trading.
Helitaanka Dayax Fx Candlestick Awood Badan.
Helitaanka Dayax Fx Patterns Awood Badan.